Shiinaha Warshad dhirta qashinka Pyrolysis qashinka gudaha iyo soosaarayaasha | LYBH
Qashinka adag ee dawlada hoose iyo qashinka guryaha ee guud ahaan waxay ka kooban yihiin waxyaalaha maalinlaha la isticmaalo ee la tuuro. Qashinkan guud ee caadiga ah waxaa badanaa lagu ridayaa bac madow ama weel ay ku jiraan isku dar ah waxyaabo dib loo isticmaali karo oo qoyan iyo qalalan, dabiici ah, maaddooyin aan dabiici ahayn iyo kuwa dib u habayn kara.
Qalabka daaweynta qashinka gudaha ee ay baareen oo ay soo saartay shirkadeena ayaa si buuxda otomaatig u ah quudinta ilaa dhamaadka howsha kala soocista. Waxay socodsiin kartaa 300-500 tan maalintii oo kaliya waxay ubaahantahay 3-5 qof oo shaqeeya. Qalabka oo dhan uma baahna dabka, alaabada ceeriin ee kiimikada, iyo biyaha. Waa mashruuc dib-u-warshadaynta deegaanka looga baahan yahay gobolka.
Ka dib markii la kala sooco qashinka ku nool magaalada ugu weyn, oo ay ku jiraan balaastigga qashinka qalajiyaha durbaanka lakabyo badan ka dib markii la qalajiyo ka dib, sheyga loo yaqaan 'gasifier', foornada ka dib qalajinta, dildilaaca, koloriinta, yareynta wax soo saarka, nadiifinta gaaska guban kara ee lagu buufiyo, kala saarida gaaska-dareeraha, marka lagu daro biyaha ku jira taarikada buuxsamaysa oo xaalufinaysa, kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka, uumi ka soo baxa kuleylka dhaliyaha matoorka uumiga si ay u dhaliso koronto, awooda waxaa loo isticmaali karaa muwaadiniinta.
Saliida culus ee ay soo saarto qolka lagu nadiifiyo buufinta waxaa loo diraa foornada pyrolysis si loogu sii daro pyrolysis si loo soo saaro saliid iyo gaas. Uumiga ka dib, saliida shidaalka ee fudud ayaa la helaa oo gaaska aan la koobi karin ayaa dib loogu gubay foornada pyrolysis.
Gaasteriga iyo foornada pyrolytic waxay soo saartey kaarboonka ururinta kaashka madow dhammeystirka iibka kadib.
Gaaska qiiqa ee ay soo saaraan kuleylka kuleylka kuleylka iyo foornada pyrolysis waa la ururin doonaa waxaana loo diri doonaa tawada atom ka saarista boodhka si uu ula kulmo heerka ka saarista boodhka, ka dibna loo diro qiiqa dabka si looga saaro dheecaanka sare ee mashiinka qaboojiyaha ah.
Nidaamka oo dhan waa macquul, tikniyoolajiyaddu waa mid horumarsan, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, nidaamku asal ahaan uma baahna ilo kuleyl dibadeed ka dib hawlgalka caadiga ah, gaaska is-soo saaray ayaa asal ahaan buuxin kara shuruudaha kuleylka. ma jiro seddex qashin (dareeraha qashinka, haraaga qashinka, gaaska qashinka).
Gaaska qiiqa ee la daweeyay wuxuu si buuxda u buuxiyaa heerarka qiiqa qaranka ee wax u dhimaya mana saameyn doono deegaanka ku xeeran. Hadhaaga daaweynta ka dib waa 3% -5% qashinka la daweeyay, taas oo asal ahaan la mid ah qiimaha halkii tan marka la barbar dhigo daaweynta qashinka-dhaqameed. Laakiin waxay keydisaa kheyraad badan oo dhulka ah waxayna ka fogaataa wasakheynta biyaha dhulka hoostiisa.
a. Qaadashada tiknoolajiyada alxanka tooska ah ee qotodheer
b. Dhamaan alxamida waxaa lagu ogaan doonaa habka tijaabada nondestructive ultrasonic si loo hubiyo tayada alxanka iyo
c. Qaadashada nidaamka xakamaynta soosaarka nidaamka xakamaynta tayada, geeddi-soo-saar kasta, taariikhda soo saaridda, iwm.
d.Waxaa lagu qalabeeyaa aaladda ka hortagga qarax, filtarka badbaadada, filtarka degdegga ah, cadaadiska iyo mitirrada heerkulka, iyo sidoo kale nidaamka cabsida leh.
2. Deegaanka u roon:
a. Heerka Qiiqa: Qaadashada gaasaska gaaska khaaska ah si looga saaro gaaska aashitada iyo boodhka qiiqa
b. Uur inta lagu guda jiro hawlgalka: Si buuxda loogu lifaaqay inta lagu gudajiray hawlgalka
c. Wasakhaynta biyaha: Wax wasakh ah haba yaraatee ma jirto.
d. Wasakhda adag: adag ka dib pyrolysis-ka waa fiilooyinka kaarboonka madow iyo birta ceyrsan oo si qoto-dheer loo baaraandegi karo ama loo iibin karo si toos ah qiimaheeda.
Waqtiga damaanada 1.Quality: Hal sano oo damaanad qaad ah oo loogu talagalay fal-celinta ugu weyn ee mashiinnada pyrolysis iyo dayactirka nolosha oo dhan ee mashiinnada oo dhameystiran.
Shirkadeenu waxay u dirtaa injineero rakibida iyo ka shaqeynta goobta iibsadaha oo ay ku jiraan tababarka xirfadaha shaqaalaha iibsadaha ee hawlgalka, dayactirka, iwm.
3. Khariidad u sameynta sida ku xusan aqoon-isweydaarsiga iibsadaha iyo dhulka, macluumaadka shaqooyinka madaniga ah, buugaagta hawlgalka, iwm.
4. Khasaaraha ay geysteen adeegsadayaashu, shirkadeena waxay siisaa qaybaha iyo agabyada qiimaha qiimaha.
5. Warshaddeena waxay siisaa qaybaha xiran dharka qiimaha macaamiisha.
Hore: Saliida Saliida Pyrolysis
Xiga: Qashinka Bacda Pyrolysis
Dufcaddii Pyrolysis Qalabka
Pyrolysis joogto ah
Warshad Pyrolysis joogto ah 20tpd ~ 100tpd
Geedka Pyrolysis-ka ee Sii-socda 20tpd ~ 100tpd
Warshadaha Sii Wada Pyrolysis Warshadda 100tpd
Duugga Taayirada Recycle Pyrolysis
Duugga Taayirada Recycle Pyrolysis Plant
Pyrolysis-ka Semi Sii-wadashada ah
Warshad Turos Pyrolysis
Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada
Caaga Qashinka ah Mashiinka Pyrolysis Oil
Qashinka Caaga Qashinka Qalabka Pyrolysis
Qashinka caaga ah ee Taayi Pyrolysis Plant
Qashinka Mashiinka Pyrolysis
Taayirada Qashinka Mashiinka Pyrolysis
Worn Warshad Dib-u-warshadayn
1. Si buuxda u fur albaabka: rar ku habboon oo dhakhso leh, qaboojin dhakhso leh, silig ku habboon oo dhakhso leh. 2. Qaboojinta qaboojiyaha, heerka waxsoosaarka saliidda ee sarreeya, tayada saliidda oo wanaagsan, adeegga muddada dheer iyo nadiifinta fudud. 3. Qaab-dhismeedka biyaha asalka ah ee sifududeynta iyo ka-qaadidda boodhka: Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa gaaska iyo boodhka aashitada, waxayna la kulmi karaan heerarka qaran ee la xiriira 4. Ka saarida ka saarida bartamaha albaabka foornada: hawo la'aan, ka bixid otomaatig ah, nadiif ah oo aan boodh lahayn, waqtiga badbaadinta. 5. Amniga: otomaatiga ...
Waxaa burburi doona jajabka taayirka ka dib marka suunka la qaado, miisaanka suunka, qalabka wax lagu kala qaado, iwm cadaadiska xun ee nidaamka pyrolysis joogto ah iyada oo loo marayo pyrolysis, nidaamka ka dib marka heerkulka falceliska wajiga gaaska uu yahay 450-550 ℃ iyadoo lagu jiro xaalad faaruq ah falcelinta, soo saar saliidda pyrolysis, kaarboonka madow, silig pyrolysis iyo gaaska guban kara, gaaska guban kara kala saarida qeybta soo kabashada saliida iyo gaaska ka dib marka aad gasho foornada kuleylka kulul, ee wax soo saarka oo dhan ...
Faahfaahinta Badeecada: Nidaamka daryeelka kahortaga (oo uu bixiyo macmiilku) Ka dib markii caagaga qashinka ay fuuq baxaan, la qalajiyo, la jajabiyo, iyo habab kale, waxay heli karaan cabir ku habboon Nidaamka quudinta Balaastikada qashinka ah ee horay loo sii daayay waxaa loo qaadayaa weelka kala guurka. Nidaamka pyrolysis ee joogtada ah Balaastigyada qashinka waxaa si isdaba joog ah loogu quudiyaa fal-celinta pyrolysis iyada oo loo marayo quudiyaha loo yaqaan 'pyrolysis'. Nidaamka kululaynta Shidaalka qalabka kululaynta wuxuu inta badan adeegsadaa gaaska aan guban karin ee ay soo saarto pyrolysis of wast ...
Faahfaahinta alaabta: Foornada dildilaaca ee joogtada ah, oo sidoo kale loo yaqaan foornada dildilaaca U-nooca, waxaa loogu talagalay ciidda saliidda dhoobada iyo wasakhda dhirta bullaacadaha, foornada ugu weyn waxay u qaybsan tahay laba qaybood: foornada qalalan, foornada carbonization. Maaddadu marka hore waxay gashaa foornada qalajinta, qalajinta hordhaca ah, uumi baxa biyaha, ka dibna waxay galeysaa dildilaaca foornada carbonization, roobab ka kooban maadada saliidda, ka dibna dheecaanka caadiga ah ee haraaga ah, si loo gaaro joogto ...
513 Guangzhou North Road, Jiaozhou City, Qingdao, Shiinaha
Taayirada Pyrolysis, Warshad Pyrolysis joogto ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Sifee caag ah, Dufcaddii Pyrolysis Plant, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga,